Kedu ihe bụ ike zoro ezo nke backlinks ọkọollow?
All webmasters na-ekwu otu ihe ahụ. Njikọ Dofollow bara uru maka njikarịcha weebụsaịtị, ebe ịda mbà bụ ihe na-abaghị uru. Otú ọ dị, nke ahụ abụghị eziokwu - best cctv. O nwere ike ịdaba na ikpe ma ọ bụrụ na ị na-eche naanị banyere njikọta njikọta ozugbo. Ogologo oge a, nke a pụtara na ị na-egbusi ọtụtụ njikọ njikọ nke ị nwere ike ịnweta site na backolite na-ebuollow.
Ọ nwere ike ịkọwa ya ọtụtụ ihe. Nke mbụ, Google ka na-eche banyere njikọ ala ala ma hụ na ha dị ịrịba ama maka mmụba aha ọma. Ọ na-eleba anya na backlinks na ebe nrụọrụ weebụ website mgbe ị na-agbalị ichikota ma ị nwere ahụike dị mma ma dị mma. Ọzọkwa, enwere ike ịdebanye aha backlinks, nke na-enyere aka hụ na isi iyi weebụ dị ndụ. Nlekọta backlinks nofollow na-arụ ọrụ dị oke mkpa na ahịa ahịa.
Olee otú Google si emeghachi omume na backlinks dị na ala?
A ga-agwa Eziokwu, Google na-eme ma azụlinks abụọ na doollow. Naanị otu ọdịiche dị na mmiri nke njikọ njikọ, ọ na-agafe site na backlinks ọkọollow. Google weere njikọ njikọta dịka akụkụ nke profaịlụ backlink dị mma. Ọ bụrụ na a backlink profaịlụ mejupụtara naanị dofollow backlinks, ọ na-ese enyo maka search engines. Ụdị profaịlụ ndị dị otú ahụ na-adịghị ahụkebe nwere ike ịnweta ahụhụ. Ya mere, inwe ala njikọta bụ netwọk nchekwa kwesịrị ekwesị iji nweta.
Uru ọzọ nke backlinks dị na challowos bụ na ha na-enyere engines na-achọ aka ma na-edepụta ebe gị. Njikọ Nofollow nwere ike ime ka Google gwuo otu n'ime ibe weebụ gị nke na-enwetaghị okporo ụzọ n'ihu nke ahụ. Ihe dị mkpa ebe a bụ na njikọta njikọ dị iche iche na-ekwenye na engines na-achọgharị nwere ike ịchọta, ịkwanye ma depụta saịtị gị, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ gaghị agafe nhata ma ọ bụ na-edekọ mkpụrụ okwu ederede arịlịka.
O kwesịkwara ịkọwa na njikọta njikọta nwere ike ịkụ aka. Ọtụtụ webmasters anaghị arụ ọrụ na ntanetị azụ backlinks dị ka ha chere na ọ gaghị adị irè maka mmepe azụmahịa ha. Nsogbu bụ na ha anaghị ahụ ezigbo uru n'azụ njikọ njikọ. Ọ bụrụ na ị na-ebipụta ọdịnaya dị ukwuu nke ikpo okwu nke na-enye nanị njikọ njikọ, ọ ka nwere ike ịbara gị uru dị ka ndị ọrụ na-achọta ọdịnaya gị dị mma na mma, ga-ekekọrịta ya na nhazi ntà ha.Ya mere, n'ihi ya, ị ka ga-enweta ọtụtụ azụlinks dofollow organic.
Ọ bụ ya mere ọbụla njikọ njikọ nwere ike ọ gaghị agafe ngọngọ aka na ụzọ ọtụtụ n'ime anyị na-aghọta, ma ọ ka bara uru maka saịtị anyị na njikwa njikwa search engine.Obi abụọ adịghị ya na ala azụlinks na-eme ka nkwalite ebe nrụọrụ weebụ dị na SERP. Na ikpughe, na okwu ya, nwere ike ime ka ndị ọzọ dofollow okporo ụzọ njikọ njikọ gị na saịtị.
Iji kwubie m ga-achọ ikwu na backlinks dofollow kwesịrị ịbụ ihe kachasị mkpa gị, mana ị gaghị ahapụ ohere maka njikọ na mkpado oche. Njikọ ndị a nwekwara ike iji aka na indexing ma na-emepụta njikọ ndị ọzọ.